प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ : राजीनामा दिनेबाला छैन म, देशलाई बर्बादीतिर जान दिन्न…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ : राजीनामा दिनेबाला छैन म, देशलाई बर्बादीतिर जान दिन्न…हेर्नुहोस् ।
कार्तिक १९, २०७७ बुधबार 38
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई केहिले पदबाट हटाउने प्रयन्त गरिहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थि,रतातिर धकेल्न खोज्ने आदत भएकाहरुले पदबाट हटाउन खोजेको आ,रोपसमेत लगाउनुभयो ।
यद्यपि उहाँले पदबाट कदापी राजीनामा नदिने बताउनुभएको छ । आज मनमोहन सेन्टर एनेक्सको भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए देश बरबादीतर्फ जाने दा,वी गर्दै पदबाट नहट्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अरे भन्ने हल्लाको पछिाडि नलागी आफ्नो कमामा केन्द्री,त हुन आह्वानसमेत गुर्न भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘अहिले मैले राजीनामा दिन मिल्छ ? मेराे लागि हाेइन, देश र जनताकाे लागि हाे, मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो । म राजीनामा दिनेवाला छैन।’
उहाँले आफू प्रधानमन्त्री पदमा जालझेल र तिक्डमबाट नभइ जनताको आवश्यकता र व्यापक समर्थनबाट पुगेको बताउनुभयो । पार्टी भित्रका आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका साथै बरिष्ठ नेताहरु असन्तुष्ट रहनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबि,रुद्ध अबिस्वास प्रस्ताबकाे प्रयास र सरकारी निवास वालुवाटारमा केही दिनअघि भारतीय गुप्तचर निकाय रअका प्रमुखसँग गोप्य भेट गरिपछि नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट बन्नुभएको छ । नेताहरुमा बढेको अस,मझदारीका कारण पार्टी एकता नै सं,कटमा पर्ने ख,तरा बढेकाे छ ।
युरोपेली आयोगसँग सहकार्यका क्षेत्र बढ्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास !
रासस काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र युरोपेली आयोग (इ’यु) बीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउँदै सहकार्यका नयाँ क्षेत्रमा कार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका लागि युरोपेली आयोगका
नवनियुक्त डे’लिगेसनका प्रमुख (राजदूत) नोना डि’प्रेजले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गर्नुभएको शिष्टाचार भेटमा क्रममा नयाँ राजदूतलाई स्वागत गर्दै उहाँको कार्यकालमा आ’पसी सम्बन्ध अझ प्र’गाढ होस् भन्ने कामना गर्नुभएको हो ।
भेटमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र इयुबीच धेरै विषयमा स’मनता रहेको जनाउँदै इयुले कोभिड १९ को
रोकथाम र उपचारलगायत विविध विषयमा गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । जवाफमा राजदूत नोनाले नेपालमा जलवायु प’रिवर्तनलगायत क्षेत्रमा आफूहरुले थप सहकार्य गर्न चाहेको र विगतदेखि हुँदै आएको सहयोगको निरन्तरता हुने बताउनुभएको थियो ।
Prevनेपालमा प्रधानमन्त्री केपि ओली कै संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो !
Nextमेयर शाक्य भन्नुहुन्छ : काठमाडौंलाई मागीखाने शहरको रुपमा चिनाउने काम नगरौं…हेर्नुहोस् ।
खुसीको खबर – कोरोना भाइरस वि’रुद्व ९५ प्रतिशत प्रभा’वकारी मानिएको अर्को खोप आयो…हेर्नुहोस् ।
प्रचण्डलाई ओलीको चुनौती – आ’रोप पुष्टि गर्न नसके अध्यक्ष पद छोड्नुपर्छ ।